Madaxweynaha dalka Uzbekistan oo la soo sheegayo in u geeriyooday – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha dalka Uzbekistan oo la soo sheegayo in u geeriyooday
Star FM September 2, 2016
Waxaa lagu soo waramaya in uu geeriyooday madaxweynihii dalka Uzbekistan oo goor sii horeysay laga deyrinaayay xaladiisa caafimad, Madaxweynahaasi ayaa ahaa madaxweynaha mudada dheer xilka hayay ee dalkaasi Islam Karimov.
Warar hoose oo laga helayo dowlada dalka Uzbekistan ayaa waxay sheegayaan in Mr Islam Karimov u geeriyooday wallow arintaas aysan ilaa iyo hadda ku dhawaaqin dawlada Uzbekistan.
Arrintaan ayaa horseedi karta in dalka Uzbekistan oo ah waddanka ugu dadka badan dalalka ku yaalla bartamaha qaaradda Asia ay ka dhacdo awood wareejintii xilka madaxweynaha ee ugu horeysay tan iyo markii uu xornimada qaatay dalkaas.
Madaxweyne Karimov oo markii hore xanuunsanaa ayaa waxa ay xaaladiisa aad usii xumaatay 24-kii saacadood ee lasoo dhaafay, sida lagu sheegay war maanta oo jimce ah kasoo baxay golaha wasiirrada ee dalka Uzbekistan.
Madaxweynaha 78 sano jirka ah ayaa isbitaalka ku jiray tan iyo maalintii sabtida ahayd ee isbuucii la soo dhaafay.
Shacabka Uzbekistan ayaa shalay oo ahayd 1-di bisha September u dabaal dagay maalinta ay xoriyadda ka qaateen gumeysiga, waxaana markii ugu horeysay fagaaraha xuska maalinta gobanimada kasoo muuqan waayay madaxweynaha, taasoo keentay in ay isa soo taraan wararka ku saabsan xaaladiisa caafimaad ee liidata.
Warar markii hore soo baxay oo dib laga beeniyay ayaa sheegayay in Mr Karimov u geeriyooday 29-ki bishii August ee la soo dhaafay.
← Laba qof oo xubin ka ah Kooxda MRC oo lagu eedeynayo dilalka ciidamo boolis ah oo gacanta ciidamada booliska ku sii jiri doono
Raila odinga oo La filayo in markale uu booqasha ku tago galbedka dalka →